Ny World of Computer Viruses - Semalt Expert
Ny ordinatera misy fifandraisana aterineto dia mety hiatrika loza maro isan-karazany. Iray amin'ireo loza mitatao voalohany ny virus virtoaly. Tsy mety ny milaza fa lasa virosy mahazatra ny viriosy amin'ny Internet amin'izao andro izao, mamela ireo hackers hamelezana ny fitaovanao ary hangalatra ny mombamomba anao manokana.
Maro ny baikon'ny rindrambaiko noforonina mba hiteraka olana ho an'ireo mpampiasa aterineto. Azonao atao anefa ny manaisotra azy ireo amin'ny alalan'ny fikatsahana ny fanampian'ny solosaina iray amin'ny solosaina ary amin'ny famaritana ny toetoetran'ilay olana. Ahoana no fomba hamahana ny malware-ny maimaim-poana? Fanontaniana iray izay matetika no anontaniany, saingy tsy mamaly valiny mahafa-po ireo manam-pahaizana.
Rehefa hita ny rindranasan'ny rindrambaiko, dia lasa mandidy antsika ny mamantatra ilay olana ary manaisotra viriosy amin'ny solosaina haingana araka izay azo atao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao i Ross Barber, Semalt Tomponandraikitra amin'ny Success Successor, fa mety hiteraka fiantraikany goavana eo amin'ny fitaovanao ny viriosy.
Virosy sy kankana
Virosy amin'ny ordinatera dia programa manokana izay afaka miely eo amin'ny ordinatera ary miafina ao anatin'ny rafitrao. Izy io dia mamerina ireo rakitra ary manimba ny angona sy ny fampiharana rehetra. Ary koa, afaka mandeha amin'ny fitaovana iray mankany amin'ny iray hafa izy raha tsy misy ny fahalalanao.
Ny endri-tsoratra maoderina maro samihafa dia ampiasaina hanaraha-maso ireo mpampiasa aterineto..Indraindray, hahita tsipika mahiratra ao amin'ny Internet ianao, ary ny hafainganam-pandehan'ny vitan'ny ordinateranao dia mihena.
Nipoitra tamin'ny taonjato faha-19 tany am-boalohany ny atidoha ary niparitaka teo anelanelan'ny fitaovana elektronika mifandray amin'ny Wi-Fi. Miseho amin'ny endriky ny hafatra mampikorontan-tsaina eo amin'ny efijery. Ny virosy voalohany dia nantsoina hoe Elk Cloner. Nosoratana tamin'ny taona 1980 izany ary nisy fiantraikany tamin'ny ordinatera maro tamin'ny alalan'ny floppies.
Ny tranaona sy ny herisetra
Azo antoka ny filazana fa virosy sy kankana tsy olana intsony, fa ny tranaona sy ny herisetra dia nahatonga endrika mafy. Miasa toy ny fitaovam-piadiana mahery vaika izy ireo hahazoana ny fitaovana ampiasainao. Manery ireo orinasa sy mpampiasa rindrambaiko hanakatona ny rafitra izy ireo na hangataka azy ireo handoa ny vidim-piafara alohan'ny hanadiovana ny rafitra.
Maro ireo mpanakorontana no nangalatra ny tenimiafina, usernames ary ny karatry ny karatra ho an'ny olona aman-jatony an'arivony. Mametraka ny fandaharan'asany manokana ao amin'ny rafitrao izy ireo ary mampiseho windows pop-up sy mampihetsi-po, mamela ny milina ao anatin'ny segondra. Ireo programa ireo dia antsoina hoe soavaly trozona. Misy porofo fa mahazo vola be ny viriosy sy ny mpamorona ny soavaly amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fitaovana mifandray amin'ny aterineto.
Spam sy spammers
Nandritra ny fandehan'ny fotoana, nanomboka nanararaotra botnets ny solosaina sy ny piraty mba handefasana mailaka mampiahiahy ho an'ny olona marobe. Raha mahazo mailaka toy izany ianao dia tokony hijery ny PC ianao ho an'ny zombies sy viriosy ary hanakana ny ID rehetra rehetra izay mampiahiahy. Ireo mpankasitraka dia manatrika na aiza na aiza, ary sahirana be amin'ny famitahana ny mpampiasa amin'ny fomba iray na ny iray hafa.
Ny famonoana dia endri-tsarety hafa izay mamandrika ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny mailaka sy hafatra hafahafa amin'ny media sosialy. Maro amin'ireo mpanakorontana sy mpitsikilo no nanakorontana ny mpiserasera, nangalatra ny volany ary nanimba ny fitaovan'ny ordinaterany Source .